War Deg Deg Ah: Askari Gabadh Yar Oo 6 Jir Ah Ku Kufsaday Magaalada Cadaado Ee Xarunta Maamul Gobolleedka Gal-mudug Oo La Soo Qabtay - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Askari Gabadh Yar Oo 6 Jir Ah Ku...
Iyadooo Bilihii u dambeeyay ay soo badanayaan Falalka Kufsiga ah ee ka dhaca Dhulka Soomaalidu degto, ayaa Waxa Shalay Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamul-gobolleedka Gal-mudug waxa lagu soo bandhigay Askari ka tirsan Ciidammada Milletariga ee Maamulka Gal-mudug, kaasi oo lagu eedeeyay inuu kufsaday Gabadh yar oo da’deedu tahay Lix Sanno jir.
Ninkan oo ay soo qabteen Ciidamadii uu ka tirsanaa, ayaa waxa Warbaahinta u soo bandhigay Ciidammada Saldhig Booliis oo ku yaalla Cadaado oo Ninkani ku xidhan yahay, waxaana la hor-geeyay Gabadhii yarayd ee kufsigeeda lagu eedeeyay bal inay garato iyo in kale, laakiin markiiba farta ayay saartay Ninkii Kufsigeeda ku eedaysnaa.
Intaasi ka dib, waxa sida Arrinka Kufsigu u dhacay ka warramay Faysal Daahir oo Adeer u ah Gabadha yar ee la fara-xumeeyay, waxaanu yidhi, “Dhacdadan foosha xumi waxay degmada Cadaado ka dhacday 29-kii bishii koowaad ee Sannadkan. Ninka Kufsaday Gabadha yar ee aan Adeerka u ahay maaha Qof caadiya ee waa Askari ka tirsan qaybta 21-aad ee Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliya. Gabadha Bac ayuu afka kaga guray, markaas ayuu Afduubay, awood ay ku hadasho ama ku qayliso may yeelan, Waayo? waa Nin Tababbar oo wuxuu isticmaalay Hab ay mararka qaarkood Dadka ku qabtaan, Cidna ma ogaanin markaa.”
Ninkan oo hadalkiisa sii wata, ayaa sheegay, “Falkani wuxuu dhacay Abbaaro 7:35 Daqiiqo Habeennimo, waxaana soo qabtay Ciidammadii uu ka tirsanaa oo ka argagaxay Falka uu geystay. Askarigu Inanta Bac buu Afka ugu guray, dabadeedna Afka ayuu Gacanta ka saaray, Awoodda uu u isticmaalay waxay ku sigatay inay u geeriyooto, laakiin ILAAHAY baa bedbaadiyey.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa raaciyey in Caafimaadka Gabadhu xun yahay isla-markaanay aanay socon karin, Suuligana aanay geli karin.
Taliye ku xigeenka Booliiska degmada Cadaado Cumar Macalin oo isaguna arrintan ka hadlay, ayaa sheegay inay Maxkamad hor-geyn doonaan Ninkan ku eedaysan inuu Kufsaday Gabadha yar ee Lix sanno jirka ah.
Toddobaadkan, ayaa Culimo loo xil-saaray waxay Magaalada Gol-dogob ee Puntland waxay Xukun ku rideen Shan dhallinyaro ah oo kufsaday Laba Hablood isla-markaana Muuqaallo ay ka duubeen ku baahiyey Internet-ka.
Somaliland: House of Representative speaker arrives in Somaliland